यस मुक्त लागि साँच्चै सबै छ ?
किन म दर्ता गर्नुपर्छ ?
म विज्ञापन बिना कसरी सिक्न सक्छौं ?
म कसरी आफ्नो परियोजना मदत गर्न सक्छ ?
कति समय छुँदा-प्रकार सिक्न ले ?
तपाईं कसरी सूचक शब्दहरू प्रति मिनेट (WPM मा हुनु पर्छ) उपाय ?
के म TypingStudy.com प्रयोग गर्नुपर्छ ?
म पाठ सुरु गर्दा, कार्यक्रम म Shift + पत्र प्रेस गर्न छ भनी देखाउँछ । किन कि छ ?
यो कसले लागि हो ?
यो dyslexic मान्छे को लागि उपयुक्त छ ?
1) तपाईं दर्ता भने, तपाईं इतिहास साथ प्रगति जानकारी हुनेछ ।
2) तपाईं एउटा सानो दान पछि (विज्ञापनहरू बिना सिक्न सक्छन्)
साना दान पछि हामी आफ्नो खाता देखि विज्ञापन हट्नेछ । यस मार्गदर्शन प्रक्रिया हो किनभने, रोगी हुन ।
1) तपाईं जस्तै र नफरत के बारेमा लेख्नुहोस् टिप्पणी
2) कसरी सिक्ने सुधार गर्न आफ्नो विचार, बारे लेख्नुहोस्
3) https://www.facebook.com/TouchTypingStudy हामीलाई सामेल, (हाम्रो बारेमा आफ्नो मित्रहरुलाई बताएँ सामाजिक नेटवर्क मा हाम्रो वेबसाइट साझा
समय को राशि राम्रो स्पर्श टाइप आफ्नो व्यक्तिगत लक्षण मा निर्भर गर्न सिक्नुपर्ने । यो नियमित अभ्यास गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ । राम्रो परिणाम लागि हामी एक दिन 1 पाठ लिन सुझाव ।
सबै पत्रहरू तपाईं छिटो टाइप लागि तयार मतलब छैन जहाँ थाह, सम्झना । आफ्नो औंलाहरु चाबी बारेमा सोच वा कुञ्जीपाटी देख बिना, आन्दोलन पैटर्न या प्रत्येक विशिष्ट प्रमुख स्थित छ जहाँ तथाकथित 'मांसपेशी आन्दोलन स्मृति' विकास गर्न आवश्यक छ । स्वचालित आन्दोलनहरु मात्र धेरै पुनरावृत्ति को माध्यम विकसित गर्दै छन् । सम्झना - मात्र अभ्यास सिद्ध बनाउँछ !
WPM मा हुनु पर्छ नाप्न, कार्यक्रम तपाईं प्रति मिनेट लेखिएको छ कति शब्दहरू भाँचिदिन्छ । अन्तरिक्ष र विराम चिन्ह सहित 1 शब्दहरू =5वर्ण, ।
प्राविधिक पक्ष देखि तपाईं मात्र एक इन्टरनेट जडान आवश्यक छ । तर, तपाईं पनि आफ्नो टच टाइपिङ कौशल सुधार गर्न प्रेरणा र तत्परता हुन सक्छ ।
लक तपाईं टाइप सुरु हुँदा छैन Caps सुनिश्चित गर्नुहोस् । कैप्स लक मा छ भने, कार्यक्रम सोधे कुञ्जी थिच्नुहोस् + साथ सिफ्ट गर्न सोध्छन् ।
अध्ययन टाइप तिनको टच टाइपिङ सीप विकास गर्न चाहने सबैका लागि हो । टच टाइप सही चाबी पाउन कुञ्जीपाटी देख बिना, टाइप गर्न एक व्यक्ति सक्षम कौशल छ ।
हो, टाइप अध्ययन dyslexia संग मान्छे को लागि पनि उपयुक्त छ । टच टाइपिङ कौशल संग यी मानिसहरू टच टाइपिङ कौशल बिना जस्तै क्षेत्रहरु को एक नम्बर मा एक छुट्टै फाइदा छ । केही dyslexic मान्छे हस्तलिपि संग समस्या छ रूपमा, दुवै एक गति र पठनीयता दृष्टिकोणबाट, टाइप काम यसैले अधिक सुविधाजनक हुनेछ ।